CTRL + C ကိုအီး CTRL + V ကို entre ကို Windows ကeVM က Linux ကိုအဘယ်သူမျှမရဲ့ Virtual Box ကို – တေလာ Lopes ツဘလော့
– Debian Oracle VM VirtualBox9Netinst virtualizado
ပြandနာက Windows နှင့် Linux အကြားကူးယူကူးယူ။ မရပါ (Virtualized). CTRL + C နှင့် CTRL + V တို့ကိုလုပ်သောအခါ, ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.
အင်တာနက်ဖိုရမ်များတွင်အဆိုပြုထားသောအဖြေကပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်၎င်းသည်အထုပ်ကိုတပ်ဆင်ရန်လုံလောက်သည်ဟုဆိုသည် “ဧည့်ထပ်တိုး” အဘယ်သူမျှမ Oracle က VM ကို VirtualBox, ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, အောက်ပါအမှားအတွက်ရလဒ်:
"Failed to set up service vboxadd, ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်တမ်းဖိုင်ကိုစစ်ဆေးပါ"
ငါဘယ်လိုသုံးခဲ့သလဲ Netinst (Debian ၏ပါးလွှာသောဗားရှင်း), ၎င်းလည်ပတ်နေစဉ်လိုအပ်သော software အချို့ပျောက်ဆုံးနေနိုင်သည် “ဧည့်ထပ်တိုး”.
အပိုဆောင်း packages များ Installing:
apt-gcc လုပ် install လုပ်ပါ
apt-Linux ထည့်သွင်းပါ-ခေါင်းစဉ်များ-$(မှတ်ပုံတင် -r)
apt-get update apt-get install make gcc apt-get install linux-headers-$(apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$) init 6
apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$.
apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ “ဧည့်ထပ်တိုး”:
// အဆင့် 1
apt-get install လုပ်ရန် gcc
apt-get install linux-headers-$, apt-get အပ်ဒိတ်
apt-get install linux-headers-$ > apt-get အပ်ဒိတ်
apt-get install linux-headers-$
// အဆင့် 2
apt-get install linux-headers-$.1.24apt-get အပ်ဒိတ်
apt-get install linux-headers-$ (apt-get အပ်ဒိတ်
apt-get install linux-headers-$) apt-get အပ်ဒိတ်
// အဆင့် 3
apt-get install linux-headers-$:
cd /မီဒီယာ/apt-get အပ်ဒိတ်
apt-get install linux-headers-$/
// အဆင့်4- တပ်ဆင်!
apt-get install linux-headers-$ ./apt-get အပ်ဒိတ်
apt-get install linux-headers-$*.apt-get အပ်ဒိတ်
// အဆင့် 1 apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$, apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ > apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ // အဆင့်2apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ (apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$) apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ // အဆင့်3apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$, apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$, apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$: apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ // အဆင့်4- တပ်ဆင်! apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$
ထိုနောက်မှ, apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ (apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ / apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$), အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း:
apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$!
စုစုပေါင်း access: 64548
28 ဇူလိုင်လ 2017 တေလာ Lopes	နောက်ထပ် guest ည့်သည်, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, virtual box, vm, ပြတင်းပေါက်
9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “CTRL + C ကိုအီး CTRL + V ကို entre ကို Windows ကeVM က Linux ကိုအဘယ်သူမျှမရဲ့ Virtual Box ကို”
9 အောက်တိုဘာလ 2018 သို့ 17:22
apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$ ကပြောပါတယ်:
apt-get အပ်ဒိတ် apt-get install လုပ်ရန် gcc apt-get install linux-headers-$. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4 ဒီဇင်ဘာလ 2018 သို့ 21:39
3 ဇူလိုင်လ 2019 သို့ 13:00
31 ဇန္နဝါရီလ 2020 သို့ 8:44
Gabriela dos Reis Silva ကပြောပါတယ်:
Sooocorro ငါနောက်ဆုံး command ကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ငါ့စက်ကမစတင်တော့ဘူး.
ပြန်လည်စတင်သည်, သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်သည့်အခါအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ၀ င်ရန်ပေါ်လာသည် (ရိုက်ထည့်ဖို့လိုလျှင်) နှင့်သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်တူညီသောမျက်နှာပြင်ပြန်သွားပါ
4 ဧပြီလ 2020 သို့ 13:26
ဘယ်စက်လဲ, တစ် ဦး VM က Debian? Ctrl + Alt + F1 ကိုစမ်းကြည့်ပါ, root အဖြစ် login လုပ်ပါ. ဖိုင် / လမ်းညွှန်ခွင့်ပြုချက်များသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်များကိုစစ်ဆေးပါ: ls -la / home / USER. တကယ်တော့ USER ပိုင်ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ပါ, မဟုတ်ရင်, ကြိုးစားကြည့်ပါ: sudo chown -R အသုံးပြုသူ:အသုံးပြုသူ / အိမ် / အသုံးပြုသူ. သင်ဝင်ရောက်ရန်သင်ကြိုးစားနေသည့်အသုံးပြုသူအမည်သို့ USER ကိုပြောင်းပါ.
30 ဧပြီလ 2020 သို့ 23:22
William Gasperi ကပြောပါတယ်:
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, အိုင်ကွန်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ရသည့်အချိန်အထိအလုပ်လုပ်သည်, ငါဂရပ်ဖစ် install လုပ်ဘို့လုပ်နေတာကတည်းက ( command line သာ).
အဲ့ဒီအချိန်အထိငါလုပ်ခဲ့, ငါမနိုင်, ငါက command ကိုကဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါကဒီမှာလည်းမရနိုင်ပါ, ဖိုင်ကိုဖွင့်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်.
20 မေ 2020 သို့ 13:52
သူငယ်ချင်း, ငါ့အဘို့ဤအရပ်၌အများကြီးကူညီပေးခဲ့သည် o /
27 ဇူလိုင်လ 2020 သို့ 22:37
Leonardo Montero ကပြောပါတယ်:
31 သြဂုတ်လ 2020 သို့ 11:17
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.479.944 ဝင်ရောက်ခွင့်